I-Airbnb: amadolobha ayi-11 ahamba phambili eLatin America kubahambi baseMelika
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Uhambo lokuzijabulisa » I-Airbnb: amadolobha ayi-11 ahamba phambili eLatin America kubahambi baseMelika
Uhambo lokuzijabulisa • Izindaba ze-Aruba • Izindaba zeBahamas Breaking • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • I-Caribbean • Izindaba zaseColombia • Culinary • Amasiko • Industry Hospitality Industry • Amahhotela nezindawo zokungcebeleka • IMexico Breaking News • Izindaba • Abantu • Ukwakha kabusha • Izindawo zokuhlala • Unomthwalo wemfanelo • Ezokuvakasha • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje
I-Airbnb: amadolobha ayi-11 ahamba phambili eLatin America kubahambi baseMelika.
Abahambi base-US abagcini ngokufuna izindawo ezinikela ngezindawo ezikhangayo zamasiko kanye nokwehla kolwandle olushisayo, kepha abaningi abavela emphakathini waseLatinx bafuna ukuxhumana nezimpande zabo futhi bavakashele lapho badabuka khona ukubona abazali, ogogo nomkhulu kanye nomndeni owandisiwe.
ILatin America yisifunda esigcwele amasiko, umlando nokuheha izivakashi okukhulu.
Ngokuya ngemininingwane evela kwa-Airbnb, isifunda saseLatin America sesiphenduke umkhuba kubahambi abavela e-US.
ILatin America imele inketho efinyeleleka yezivakashi zaseNyakatho Melika ngezindleko ezijwayelekile ngobusuku obubodwa ezingaphansi kuka- $ 150.
ILatin America yisifunda esigcwele amasiko, umlando kanye nokuheha izivakashi okuthe eminyakeni yamuva nje kwanda ukuthandwa phakathi kwabahambi abavela e-United States.
Ngaphezu kwalokho, ukuba nomphakathi omkhulu waseLatino, bekulokhu kunenkambiso yokuhambela esifundeni ukuthuthukisa nokugcina ubudlelwane bemindeni obudingekayo namuhla kunanini ngaphambili.
Ngokusho kwedatha evela I-Airbnb, isifunda saseLatin America sesiphenduke umkhuba kubahambi abavela e-US.
Ngokuya ngenani lokuseshwa okwenziwe endaweni yesikhulumi, amadolobha aphezulu angama-12 aseLatin athandwa kakhulu yilawa:
I-Mexico City, eMexico
I-Puerto Penasco, eMexico
ICartagena de Indias, eColombia
Uma kuziwa esikhathini sasehlobo, izindawo ezazithandwa kakhulu kwakungamabhishi, ikakhulukazi eMexico lapho iPlaya del Carmen ne-Ensenada babehamba khona izindawo ngo-2021, bekhuphuka izikhundla eziyi-6 uma kuqhathaniswa no-2019, kanye neTulum, eyayisuka kunombolo 7 yaya kunombolo 3 ohlwini, ngokuya ngenombolo yosesho.
Izindawo eziseDolobheni nazo zivela ohlwini, kufaka phakathi Mexico City noMedellín, bobabili baqashelwa ngokunikela kwabo okuphezulu kwamasiko.
Isifunda simele inketho efinyelelekayo yezivakashi zaseNyakatho Melika ngezindleko ezijwayelekile ngobusuku ngabunye ezingaphansi kuka- $ 150.00.
IMalta ivulekele abagonyiwe baseMelika
Ukundiza kusuka eNdiya kuye eCanada kuhlala kunguNo omkhulu
Ifu elinobuthi phezu kweJalimane ngemuva kokuqhuma kwamakhemikhali